Wararka - Sida loo horumariyo waxtarkayaga wax soo saar iyada oo loo marayo barnaamijka xarunta makiinada CNC
Qalabka saxda ah ee CNC, sida loo hagaajiyo waxsoosaarka wax soo saarka iyada oo loo marayo barnaamijka xarunta dhexe ee mashiinka CNC waa koorso loo baahan yahay oo loogu talagalay xirfadleyda makiinada. Waxyaabaha saamaynaya waxtarka mashiinka CNC waxaa ka mid ah dhibaatooyinka qalabka, dhibaatooyinka isku dheelitirka, xuduudaha mashiinka, iwm.
Ugu horreyntii, ka hor inta aan barnaamijka laga dhigin xarunta makiinadda CNC, waa inaan si taxaddar leh u barannaa sawirrada badeecada, dejineynaa habka wax soo saarka ee badeecada, oo aan u diyaarinnaa aaladaha ku habboon ee mashiinnada. Marka lagu jiro xaalada hubinta saxnaanta qalabka, mashiinka dusha sare waa in laga shaqeeyaa hal mar intii suurtogal ah, si loo yareeyo waqtiyada waxqabadka ee dusha mashiinka. Waa in la tixgeliyaa marka barnaamij laga sameynayo xarunta makiinada CNC.
1. Meeleynta hal-mar iyo isku haynta, howsha waa in lagu dhammeeyaa hal mar sida ugu macquulsan, si loo yareeyo waqtiyada wax-qabadka ee workpiece-ka, loo gaabiyo waqtiga kaalmada loona yareeyo kharashka wax soo saarka;
2. Nidaamka barnaamijyada, fiiro gaar ah u yeelo caqliga u ah qalab beddelidda si loo yareeyo waqtiga qalabka la beddelayo. Aagga lagu shaqeynayo isla aaladda waa in lagu dhammeeyaa hal mar intii suurtagal ah, si looga fogaado luminta waqtiga ee ay keento aalado is-beddelka soo noqnoqda iyo hagaajinta wax-soo-saarka wax soo saarka;
3. Si loo yareeyo waqtiga uu shaqeynayo mashiinka loona hagaajiyo wax soo saarka wax soo saar, waa in fiiro gaar ah loo yeesho mabda'a ah mudnaanta ka shaqeynta qeybaha ku dhow ee barnaamijyada;
4. Barnaamijyada, iyadoo la tixgelinayo habka loo wada shaqeynayo shaqooyin badan oo kala duwan, ka shaqeynta shaqooyin kala duwan oo hal mar ah waxay si wax ku ool ah u yareyn kartaa waqtiga xiritaanka iyo xannibaadda.
5. Inta lagu gudajiro barnaamijka, waxaa lagama maarmaan ah in laga fogaado soo noqnoqoshada tilmaamaha aan ansax ahayn oo dhaqso loogu dhaqaaqo xaalad aan culeys saarneyn si loo yareeyo waqtiga sugitaanka.
Marka lagu daro arrimaha kor ku xusan ee ay keeneen waxtarka barnaamjika xarunta CNC machining, macquulnimada qalabka nashqadeynta wax soo saarka ayaa si weyn u gaabin kara waqtiga ka shaqeynta kaabayaasha. Marka la soo koobo, waxaa jira arrimo badan oo saameeya waxtarka makiinadda CNC. Feejignaanta faahfaahinta dhab ahaantii waxay si weyn u wanaajin kartaa waxtarka hawlgalka.